www.camaloow.com - News: Degmada moqokori ee Gobolka Hiiraan oo ka cabanaya biyo yaraan dadka xoola dhaqatada ah haysta,DAAWO VIDIOGA.
December 10 2018 03:55:35
Degmada moqokori ee Gobolka Hiiraan oo ka cabanaya biyo yaraan dadka xoola dhaqatada ah haysta,DAAWO VIDIOGA.
<?php </a> Degmada moqokori ee gobolka hiiraan oo ka canaya boyo yaraan dadka xoola dhaqatada ah haysta waxay ku dhib qabaan hal ceel matoor oo ay degmadaasi leedahay.
Dadka iyo xoolahu waxay ka wada cabaan hal ceel dhib badan ayaan ku qabnaa ayay yiraahdeen dadka ceelkaas biyaha ka waraabinayay xoolaha.
gudoomiye kasta oo la soo magacaabo waxaa soo magacaaba madaxweeynaha, ma jirto waxqabad ka yimaada gudoomiyahaas ma jirto la xisaabtan madaxweeyne oo uu wax qabadkiisa ku kormeeraayo dadka uu masuuliyadooda UU u soo wakiishay .
Madax weeynuhu markii uu xilka isu soo sharaxayay waxaa dadka uu masuulka ka noqon doono soo jiidtay lix qodob oo uu sheegay in uu degma kasta garsiin doono ,waxayna kala ahaayeen sidatan , degma kasta oo wadanka ah in uu ka dhisi doono[1, saldhig boolis[2, xabsi [3,xarunta degmada [4,ceel biyood[5 isbitaal [6,iyo iskuul .
Maxaa ka qabsoomay lixdii qodob ee soo jiidatay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer hiiraan .
Hada waxaa uu mar labaad u taagan yahay in uu xilka ku soo laabto maaxad ku dooraneeysaan oo ku xasuusaneeysaan marlaabaad in uu madax weeyne idinka masuul ah noqdo taladu waa xaga dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer hiiraan.
· news on August 07 2016 · 0 Comments · 42457 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,900,716 unique visits